Korjoogaha 30-inch LCD (Dib u eeg)
Gadashada Guides Garoomada & Gawaarida
Kombiyuutarrada ugu wanaagsan 30-inch
by Tifatiraha Ganacsiga
Xulashada Shaxda Ugu Fiican ee 30-inch LCD-ka ee Hawlaha iyo Qiimaha kala duwan
Qiyaasaha 30-inch ayaa wali la tixgeliyaa muuqaalka bandhigyada xirfadeed laakiin tani waxay bedeleysaa jiil cusub oo qiimo jaban oo muuqaal ah. Tirada doorashooyinka ayaa weli ah mid aad u xadidan qiimaha guud ahaan aad ayuu u sarreeyaa marka la barbardhigo sawirada yar yar. Dabcan, waxay weli soo bandhigaan tayada muuqaalka sare iyo qaraar sarre oo adag in lagu garaaco gaar ahaan shaqada sawirada culus. Soo ogow meesha aan u maleynayo inay yihiin kuwa ugu fiican.
Iyada oo hagaajinta tiknoolajiyada, bandhigyo badan oo la awoodi karo oo badan ayaa la heli karaa. Acer B326HUL waa tusaale weyn. Muuqaalkan 32-inch oo weyn wuxuu bixiyaa qaddar aad u qadarin 2560x1440 kaasoo bixiya heer faahfaahsan oo faahfaahsan marka la barbardhigo kormeerayaasha yaryar iyada oo aan wax kharash badan bixin. Tani waxay macquul tahay sababtoo ah waxay isticmaashaa guddi farsamo ee VA oo bixisa heshiis fiican oo udhexeeya IPS iyo TN. Waa ka dhakhso badan yahay IPS guddi laakiin wuxuu leeyahay xaglo iyo sawir ka fiican kan TN. Xidhiidhiyayaasha waxaa ka mid ah DisplayPort, HDMI, iyo DVI. Waxa kale oo ay ku taala dhismaha USB 3.0-ka ah. Meelku wuxuu bixiyaa tilt, wareega iyo isbedelka dhererka.
Taxanaha Dell ee UltraSharp ayaa si wacan loogu yaqaano waxqabadkooda adag iyo noocyo badan oo xiriiriye ah iyo U3017 waxay sii wadaan dhaqankan. Shaxda 30-inji waxay bixisaa qaar ka mid ah awooda midab qurux badan leh oo leh boqolkiiba 99 caymiska sRGB iyo AdobeRGB. Intaa waxaa dheer, midabka Dell wuxuu sawir kasta ku yaalaa warshad labadaba labaduba midabkoodu midabkoodu midabkoodu wanaagsan yahay. Dell ayaa hoos u dhigtay tirada fiidiyoowga muuqaalka laakiin weli waxay bixisaa DisplayPort, mini-DisplayPort, HDMI, iyo DVI. Intaas waxaa dheer, tan hadda waxay leedahay afar afar qalab oo USB ah. Goobtu waxay taageertaa dhererka, wareegga iyo hagaajinta hagaajinta.
Bandhigyada qaabka sinaanta ayaa ka duwan kormeerayaasha intooda badan sababtoo ah waxay bixiyaan shaashad balaaran oo ballaaran. Bandhigga LG wuxuu bixiyaa xal aan caadi ah 3440x1440 oo ah qiyaasta dhalashada 21: 9 oo ah qaabka loo isticmaalo filimyo badan oo ballaaran. Waxay isticmaashaa tiknoolajiyada IPS ee xagasha muuqaalka iyo midabada weyn. Shaashadu sidoo kale wax yar ayaa lagu qurxiyo si ay u bixiso dareemo cinwaanka ah. Waxay bixisaa tiro badan oo xiriiriya oo ay ku jiraan labo HDMI 2.0, laba Thunderbolt , iyo DisplayPort. Waxay xitaa kudhexeysaa labo dekedood USB 3.0 oo lagu dhisay nidaamka. Waxaa jira laba wiyil oo 7 watt oo ku dhegan qalabka isgaadhsiinta loogu talagalay qaar ka fiican sidii codka celceliska ah laakiin dadka intiisa badani waxay u isticmaali lahaayeen kuwa ku hadla dibadda. Heerkuna wuxuu ka dhigan yahay dhererka, tilmaanta iyo hagaajinta socodka, laakiin maaha mid muujinaya shaashad balaaran.
4K Bandhigyada ayaa ah kuwo cusub oo si sharci ah u qaali ah dad badan laakiin waxay bixiyaan xalka ugu sarreeya ee suurtogalka ah. Acer B6 B326HK waa deeq la yaab leh inkastoo qiimaha kaliya ee u dhaxeeya $ 900 ilaa $ 1000 taasoo ka dhigaysa mid aad u jaban. Waxay ka kooban tahay qiyaasta 3830x2160 oo loogu talagalay 4K oo xitaa waxay adeegsaneysaa tiknoolajiyada casriga ee IPS si ay u eegaan xagal muuqaal leh iyo midab wacan. Brightness wuxuu aad u sareeyaa 350cd / m ^ 2 kaas oo dad badani diidi doonaan. Xidhiidhiyayaasha waxaa ka mid ah HDMI, DisplayPort, mini-DisplayPort, iyo DVI. Waa in la xusuustaa si loo helo qiimaha ugu sareeya ee leh qiyaasaha 4K, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho DisplayPort xirayaasha. Waxaa jira laba ka mid ah laba wejigood oo lagu dhejiyey bandhigga iyo afar dekedood oo USB 3.0 ah. Meelku wuxuu bixiyaa dhir, dhidid iyo hagaajinta hagaajinta.
Kormeerkan ayaa loogu talagalay xirfadlaha maskaxeed ee maskaxda ku hay. Qaar badan oo ka mid ah shaashadaha kor ku xusan waxay leeyihiin shaqo fiican oo midab leh laakiin waxay hoos u dhacaan wax yar oo ka mid ah waxa NEC PA322UHD awood u yeelan karaan iyo inay hubaal yihiin wax badan oo la awoodi karo. Taageerada gamut Color wuxuu aad u ballaaran yahay oo leh 99.2% caymiska barnaamijka AdobeRGB iyo daboolka buuxa ee sRGB oo ay ugu mahad celinayaan bandhigka IGZO-ku saleysan iyo 14-ka midabaynta midabka. Waxa kale oo suurtogal ah in la helo qaar ka mid ah moodooyinka ay ku jiraan SpectreView Colorimeter si loo hagaajiyo midabka si ay u noqdaan sida ugu fiican ee suurtogalka ah. Waxay ku taallaa taakulaynta 4K ama UHD buuxa iyo dhalaalka wanaagsan ee 350 nalka. Xidhiidhiyayaasha waxaa ka mid ah labo DisplayPort v1.2, hal HDMI 2.0, afar HDMI 1.4 iyo laba DVI-D. Xidhiidhiyayaasha waxaa ka mid ah labo DisplayPort, HDMI, iyo DVI-D. Waxay ka kooban tahay xarun USB 3.0 ah oo la dhisay. Qeybta ugu fiican waa in istaandarka si buuxda u taageeraan dhererka, wareegga, tilt iyo isbedelka isbedelka.
Noocyada Kulannada Kulannada
Isticmaalka Isticmaalka Dukumiintiga Microsoft Office si aad ugu Qeexdo Qoraalka Maqalka
Mesh Network - Range Extender: Waa Maxay Fiican?
10ka ugu wanaagsan ee Kumbuyuutarada ugu fiican ee iibsanaya sannadka 2018
Sida loo xiro loona xiro Webcam-gaaga PC-gaaga
Our jecel yahay Apple Watch Accessories
Laydhka ugu fiican ee 26-inch LCD
Sida Loo Xiro Mice Wireless
Ma inaan bixiyaa lacag siinta dadka?
Raadinta Dadka ee Facebook
Diiwaanada DVD-yada ugu fiican
Qalabka Isgaadhsiinta iyo Iskaashatada Ganacsiga ee Blog
Sida loo Aqoonsado Waraaqaha iyo Tarjumayaasha Isticmaalka Qaybaha Casriga ee ICC
Sida loo beddelo Macluumaadka Macmalka Mac Macluumaadka Mac OS X
Cunto-gaaga casri ma shaandheeyo haddii aad isticmaasho inta ay ku kacayso
Qalabka Degdegga ah ee Xafiisyada Kooxaha ee 365 ee ku yaalla Barxadda
Isticmaal sawirada 'Photoshop' ee loogu talagalay in ka badan Panoramas
6 Kursiga ugu fiican ee iPad-ka ee iibsanaya sannadka 2018
Waa maxay RAID 10, Miyuu Macinteyga Taageerayaa?
Miyaad Ka Badali Kartaa Hal Tube YouTube?
Dib-u-eegidda Qabiilka Super
Maxay Tahay BMP ama DIB?
Barnaamijyada Ugu Horeeya ee Dib u soo Celinta Codsiyada
Maalgelinta IT - Xisaabinta Qiimaha Maalgelinta IT
Sidee si sax ah u gali kartaa Cp-Cheat Cheat Code
10 Isticmaala kale sida Instagram oo kaliya sida Runtu u Isticmaalayso
Waa maxay Shirkadda Wicitaanka Wanaagsan ee iPhone?
Maxay tahay sababta Muujinta Madow ee Agaasimaha Moobilka?